မြောက်ကိုရီးယားမှာ စမတ်ဖုန်းသုံးခွင့်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကန့်သတ်ချက်များ | Myanmar Mobile App
Home Knowledge မြောက်ကိုရီးယားမှာ စမတ်ဖုန်းသုံးခွင့်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကန့်သတ်ချက်များ
ခန့်မှန်းရသလောက်ကတော့ မြောက်ကိုရီးယားမှာ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူအများဆုံးလူဦးရေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ သူတို့က အင်တာနက်ကိုအသုံးမပြုရပါဘူး။ နိုင်ငံထဲမှာ ရှိတဲ့ intranet ကိုပဲ အသုံးပြုရပါတယ်။ အဲ့လိုကန့်သတ်ထားရင် စမတ်ဖုန်း တွေကို ဘာလုပ်ဖို့ သုံးကြတော့မလဲ။ မြောက်ကိုရီးယားကလူအများစုက သူတို့ရဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို မက်ဆေ့ခ်ျပို့ဖို့၊ ဖုန်းခေါ်ဖို့၊ ဈေးဝယ်ဖို့နဲ့ ဂိမ်းဆော့ဖို့ အတွက်ပဲ သုံးကြရပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ သုံးလို့ရတဲ့ app တွေကလဲ ဂိမ်းတွေ၊ ebook readers နဲ့ ငွေလွှဲဖို့နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ app နဲ့ service တွေကိုပဲ သုံးလို့ရကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ app အသစ်ကိုသွင်းချင်တယ်ဆိုရင် app store ကနေ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ ဒေါင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံက ကန့်သတ်ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် app အသစ်ထည့်ချင်ရင် communication center ကိုသွားပြီးတော့ download ဆွဲရပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာတော့ အဲ့လို center တွေက 700 လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။
အသုံးများတဲ့ app တွေထဲကမှာ ရေပန်းစားတဲ့ app တွေကတော့ Netflix နဲ့ ebook reader တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်တဲ့ ဂိမ်းဖြစ်တဲ့ Mt. Paektu to Mt. Hanna လို့ခေါ်တဲ့ ဂိမ်းရယ် Ullim လို့ခေါ်တဲ့ ငွေလွှဲဖို့အတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ app ရယ်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဆီမှာ အဓိကအသုံးများပြီး ရေပန်းစားတဲ့ စမတ်ဖုန်း brand ၄ မျိုးရှိပါတယ်။ သိပ်မကြသေးခင်က ထွက်ရှိထားတဲ့ Phurun Hanul ဆိုတဲ့ စမတ်ဖုန်းကတော့ မျက်နှာပြင် ၅.၅ လက်မရှိပြီးတော့ ဖုန်းနောက်ကျောမှာ လက်ဗွေရာစနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ သူကတော့ ဘက်ထရီကတော့ 6,000mAh ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခြားဖုန်းတွေကတော့ iPhone ပုံစံမျိုးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Pyongyang Touch နဲ့ Samsung Galaxy S7 နဲ့တူတဲ့ Jindallae တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းတွေကလဲ ဈေးမချိုသာပါဘူး။ သူတို့ဆီမှာ $800 ထိကိုရှိပါတယ်တဲ့။
မွောကျကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ စမတျဖုနျးသုံးခှငျ့နဲ့ ကနျ့သတျခကျြမြား
ခနျ့မှနျးရသလောကျကတော့ မွောကျအမရေိကမှာ လူဦးရေ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျး လောကျက စမတျဖုနျးတှရှေိကွပါတယျ။ ဒါပမဲ့ သူတို့က အငျတာနကျကိုအသုံးမပွုရပါဘူး။ နိုငျငံထဲမှာ ရှိတဲ့ intranet ကိုပဲ အသုံးပွုရပါတယျ။ အဲ့လိုကနျ့သတျထားရငျ စမတျဖုနျး တှကေို ဘာလုပျဖို့ သုံးကွတော့မလဲ။ မွောကျကိုရီးယားကလူအမြားစုက သူတို့ရဲ့ စမတျဖုနျးတှကေို မကျဆခြေျ့ပို့ဖို့၊ ဖုနျးချေါဖို့၊ ဈေးဝယျဖို့နဲ့ ဂိမျးဆော့ဖို့ အတှကျပဲ သုံးကွရပါတယျ။
မွောကျအမရေိကမှာရှိတဲ့ စမတျဖုနျးတှမှော သုံးလို့ရတဲ့ app တှကေလဲ ဂိမျးတှေ၊ ebook readers နဲ့ ငှလှေဲဖို့နဲ့ ပတျသတျတဲ့ app နဲ့ service တှကေိုပဲ သုံးလို့ရကွတာဖွဈပါတယျ။ တဈကယျလို့ app အသဈကိုသှငျးခငျြတယျဆိုရငျ app store ကနေ လှယျလှယျကူကူနဲ့တော့ ဒေါငျးလို့မရနိုငျပါဘူး။ နိုငျငံက ကနျ့သတျထားတဲ့ အတှကျကွောငျ့ app အသဈထညျ့ခငျြရငျ communication center ကိုသှားပွီးတော့ download ဆှဲရပါတယျ။ သူတို့ဆီမှာတော့ အဲ့လို center တှကေ 700 လောကျရှိတယျလို့ပွောပါတယျ။
အသုံးမြားတဲ့ app တှထေဲကမှာ ရပေနျးစားတဲ့ app တှကေတော့ Netflix နဲ့ ebook reader တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ မျောတျောဆိုငျကယျပွိုငျတဲ့ ဂိမျးဖွဈတဲ့ Mt. Paektu to Mt. Hanna လို့ချေါတဲ့ ဂိမျးရယျ Ullim လို့ချေါတဲ့ ငှလှေဲဖို့အတှကျ ထုတျလုပျထားတဲ့ app ရယျတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူတို့ဆီမှာ အဓိကအသုံးမြားပွီး ရပေနျးစားတဲ့ စမတျဖုနျး brand ၄ မြိုးရှိပါတယျ။ သိပျမကွသေးခငျက ထှကျရှိထားတဲ့ Phurun Hanul ဆိုတဲ့ စမတျဖုနျးကတော့ မကျြနှာပွငျ ၅.၅ လကျမရှိပွီးတော့ ဖုနျးနောကျကြောမှာ လကျဗှရောစနဈပါဝငျပါတယျ။ သူကတော့ ဘကျထရီကတော့ 6,000mAh ပဲ ဖွဈပါတယျ။
တဈခွားဖုနျးတှကေတော့ iPhone ပုံစံမြိုးထုတျလုပျထားတဲ့ Pyongyang Touch နဲ့ Samsung Galaxy S7 နဲ့တူတဲ့ Jindallae တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီစမတျဖုနျးတှကေလဲ ဈေးမခြိုသာပါဘူး။ သူတို့ဆီမှာ $800 ထိကိုရှိပါတယျတဲ့။
Previous articleHuawei MATE 20 နဲ့ MATE 20 PRO တိုရဲ့ ကင်မရာအချက်အလက်များ ထွက်ရှိလာ
Next article5G Smartphone ကို ရောင်းချပေးလိုက်တဲ့ Motorola